Yakadzika-Mbiri Reel Vagadziri - China Yakaderera-Mbiri Reel Vatengesi & Fekitori
1.Fishing Maitiro: Mvura Yemvura YeMvura Fishing Kufamba Kufambisa & Boat Fishing
Rudzi rweReel: Baitcasting Reel - Uine reit reel, iwe unowanawo simba rakawanda rekure kure kukanda.Rudzi urwu rweiri rinokupa iwe kutonga kwakawanda uye kurongeka mukukanda asi zvinoda hunyanzvi hushoma kupfuura ma spinner.
4.Gear Ratio: 7.2: 1
5.Hand Dzidziso: Kuruboshwe-chanza Ruoko-rwerudyi
Mvura yemunyu hove reels inogona kudzoserwa uye Dhijitari kuratidza vhiri 6 + 1BB hombe hove hove vhiri
2.Reel Rudzi: Baitcasting Reel - Iine baitcasting reel, iwe zvakare unowana imwe simba rekuwedzera kure kure kukanda. Rudzi urwu rweiri rinokupa iwe kutonga kwakawanda uye kurongeka mukukanda asi zvinoda hunyanzvi hushoma pane kutenderera.
3.Geati Ratio: 8.0: 1
4.Hand Kutungamira: Kuruboshwe-chanza Ruoko-rwerudyi
Kubata vhiri gungwa 6 + 1BB 7.2: 1 Simbi yekudonha vhiri Yakareruka kaviri mukombe hove hove
1.Fishing Nzira: Bait Kukanda Gungwa Fishing Kukwezva Fishing Bass Fishing Carp Fishing Jigging Kubata.
2.Material: Aluminium chiwanikwa
3.Feature: Ultra Smooth - Akawanda uye epamusoro-mhando bhora mabheyari anoipa iyo yakanyanya-kutsetseka., Simba - Ipa simba risingamiriri rekumisa. Iyo ine yakaoma simbi main shaft, yakakwana mesh drive giya. Zvirinani kusarudza 2000 uye 3000 akateedzana akateedzana kana iwe uri muhove yemvura yakachena. Kana iwe uchidzingirira hove hombe kana mhando dzemvura yemunyu, 4000 kana yakakwira ingave iri nani sarudzo, Yekumhanyisa Kumhanya - Yedu yekumhanyisa giya reshiyo inoita kuti ukwanise kukanda hove hombe nyore.
Rudzi rweReel: Baitcasting Reel - Uine reititi reel, iwe unowanawo simba rakawanda rekure kure kukanda.Rudzi urwu rweiri rinokupa iwe kutonga kwakawanda uye kurongeka mukukanda asi zvinoda hunyanzvi hushoma kupfuura ma spinner.
5.Ball mabheyaringi: 6 + 1BB
6.Gear Ratio: 7.2: 1
7.Hand Kufambisa: Ruoko rwerudyi Ruoko rweruboshwe
ChiJapan Ryobi hove reel yemagetsi hove reel hove tsvimbo reel
1.Fishing Nzira: Kukwezva Fishing Kukosa
3.Line Unyanzvi (lbs / yds): 40/190
Riverlake AC Fekitori Mutengo Yakakwira-Simba Simba reMunyu Mvura Yegungwa Fishing Reels hove reels ari kutengeswa
3.Ball mabheyaringi: 1
4.Gear Ratio: 5.2 / 1
LP2000 surf kukanda hove reel hoel mabheyari reel hove kutenderera
Ryobi hove reel japan ryobi reel hove reels ryobi
1.Fishing Nzira: Jigging Fishing Bait Kukanda Trolling & Boat Fishing General Fishing Kukwereta Bass Fishing Carp Fishing Mvura Yemvura Yakachena Fishing
2.Reel Rudzi: Magetsi Reel Baitcasting Reel - Iine baitcasting reel, iwe zvakare unowana rimwe simba rekuwedzera kure kure kukanda. Rudzi urwu rweiri rinokupa iwe kutonga kwakawanda uye kurongeka mukukanda asi zvinoda hunyanzvi hushoma pane kutenderera.
3.Ball mabheyaringi: 9 + 1
4.Gear Ratio: 7.3: 1
5.Hand Kutungamira: -Ruoko-rwerudyi